Makore makumi manomwe nemashanu eVashanu, Enid Blyton's classic saga yevana | Zvazvino Zvinyorwa
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Vanyori, Vechidiki Mabhuku
Gunyana 11, apfuura 75 makore chiitiko chekutanga cheimwe yemasaga ane mukurumbira evana uye vechidiki zvinyorwa mumabhuku zvakaburitswa. Yaive iyo ye Iyo yechishanu uye pfuma yechitsuwa. Uye mukuwedzera, zvakazadzikiswa zvakare gore rino makore makumi mapfumbamwe kuberekwa kwemusiki wayo, munyori ane mukurumbira weBritish Enid Blyton.
Rakadhindwa mune anopfuura 90 mitauro, all editions, reissues uye adaptations Iyo terevhizheni yeiyi nhevedzano yemabhuku isingaverengeke. Ivo vanga vasina kusunungurwa pamakakatanwa munguva dzichangopfuura. Asi iyo zvikonzero yekubudirira kwayo ichine simba uye ndosaka angangoita hafu yemiriyoni emakopi achiri kutengeswa gore.
En Iyo yechishanu uye pfuma yechitsuwa Hama Julian, Dick, Ana nehama yavo Georgina nembwa yavo Tim pedza zhizha uchitsvaga hupfumi uye uchitsvaga chiuru nechakavanzika zvakavanzika mu Kirrin chitsuwa. Aya ndiwo mararamire hushamwari huchawedzera huchawedzera kusimba mune yega yega ruzivo
Y sezvavari Vashanu? Zvakanaka Julian mukuru uye mukuru, akangwara uye ane mutoro. Dick pamwe ndiyo yakanyanya misikanzwa uye dama, asi ane moyo munyoro kwazvo. Ana, mudiki, anotarisira iyo basa repamba zvekuita. Y Georgina ndinoda kuva kunge mukomana uye inosarudza kudaidzwa Jorge. Ndiye zvakare akashinga. Y Tim, hongu, iyo imbwa yaGeorge, yakashinga saiye uye ane rudo nemunhu wese.
1 Zvikonzero nei tichivada
2 Yese yakateedzana
3 Kugadziriswa kweterevhizheni
4 Mutero wekuratidzira muPortugal
Zvikonzero nei tichivada
Uye isu tichiri kuvada nekuti:
Takadzidza kuverenga navo. Uye izvo zvizvarwa zvitsva zvinoramba zvichidaro futi.
Isu tinotsvaga kekutanga. Mune zvakasikwa, munzvimbo dzisinganzwisisike, mapako nenzvimbo dziri kure, dzakasiiwa dzimba dzine ndima dzakavanzika dzakavanza zvinopfuura chakavanzika chimwe.
Isu tinowana nzira yekuda nekutarisira mhuka. Ndiani aisada kuva imbwa yakaita tim, asinganeti shamwari dzezviitiko?
Takadya mapie enyama ese yepasi, zvinyoro chingwa sandwiches, sandwiches, sarsaparrillas kana mandimu.
Pakanga pasina vakuru kupa iyo can nemitemo, mabasa kana zvisungo. Ivo vakangoonekwa kugadzirira avo vakapfuma uye vakawandisa tudyo kana madhiri. Vashanu vaigona kuita zvavaida vasina kuva neshure. Uye isu takanzwa takasununguka saivo. Asi ivo vakatidzidzisawo kuzvitarisira isu pachedu uye kudzidza mhedzisiro inogona kuita zvatinoita.
ari nharo dzaive dzega-dzakaperera, asi vaigara vaine mamwe yetsika (kana hunhu, mune ino mamiriro) uye yaigara ichichengetedza kusagadzikana. Ehezve, vakaipa vakagara vachirasikirwa uye vakanaka vakagara vachikunda. Nemaitiro ekuratidzira zvakadaro ushamwari, kuvimbika, kushanda pamwe nekubatana chero chinhu chaigoneka.
Iyo Shanu uye iyo Island Treasure (1942)
Imwe Yekushanya kweVashanu (1943)
Vashanu Vanoenda (1944)
Vashanu paSmuggler's Hill (1945)
Vashanu muKaravhani (1946)
Vashanu zvakare paKirrin Island (1947)
Vashanu vanoenda kunodzika musasa (1948)
Vashanu vari mudambudziko (1949)
Vashanu vari mukutarisana neanonakidza (1950)
Svondo reVashanu (1951)
Vashanu vane nguva huru (1952)
Iwo mashanu neGungwa (1953)
Vashanu paNyika Inoshamisa (1954)
Vashanu Vanofara (1955)
Vashanu vari kuseri kwechikamu chakavanzika (1956)
Vashanu paBillycock Hill (1957)
Vashanu vari Munjodzi (1958)
Vashanu paFinniston Farm (1960)
Vashanu paDhiyabhorosi Matombo (1961)
Vashanu vanofanira kugadzirisa chirahwe (1962)
Vashanu Vakabatana zvakare (1963)
Inonyanya kuzivikanwa (uye iyo yatakaona tese) yaive iyo British dzakateedzana 1978 ine 26 Zvikamu mumwaka mitatu, ine manzwi e Enrique naAna mukugadziriswa kwenziyo yemusoro. Paive neimwe gare gare mukati 1996, mubatanidzwa wekugadzirwa kweUK, Canada neGerman. Zvakare nezvikamu 26 mumwaka miviri.
Mutero wekuratidzira muPortugal
Kubva kuna Chikunguru 24 kusvika Gumiguru 7 nyika yakavakidzana iri kuratidza mu National Raibhurari yePortugal, in Lisboa, chiratidziro chaizvo nezve chiitiko ichi. Musoro, Enid Blyton (1897-1968): makore makumi mashanu eMashanu, vanoongorora hupenyu uye basa remunyori uyu mukati.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Vechidiki Mabhuku » Makore makumi manomwe neshanu eChishanu, saga yechinyakare yevana yaEnid Blyton
"4 3 2 1", iyo nyowani kubva kuna Paul Auster